Online services | December 2019
Misy tolotra maro samihafa amin'ny famokarana saripika, manomboka amin'ny tsotra indrindra, natao manokana ho an'ity fandidiana ity, ary mamarana amin'ny tonian-dahatsoratra feno tanteraka. Afaka manandrana karazana safidy maromaro ianao ary misafidy izay tianao tianao hampiasana maharitra. Safidy fifandanjana Anatin'ity fanavaozana ity dia misy fiantraikany ny tolotra isan-karazany - aloha, ny voalohany indrindra no horaisina, ary hampivelatra tsikelikely ny hafa.
Manova ny faharetan'ny hira ety anaty aterineto
Rehefa miasa miaraka amin'ny mozika, dia matetika no ilaina ny hampihena na mihazakazaka fichier audio. Ohatra, ny mpampiasa dia mila manamboatra ny làlana mankany amin'ny fampisehoana ny soloista, na mba hanatsarana ny feony. Azonao atao ny manatanteraka io hetsika io amin'ny iray amin'ireo tonian-dahatsoratry ny mpamoaka feo toy ny Audacity na Adobe Audition, saingy mora kokoa ny mampiasa fitaovana web ho an'ity.
Fandikana ny Code of Morse online
Ny code Morse dia iray amin'ireo endrika malaza amin'ny fametahana ny alfabeta, tarehimarika sy mari-pamantarana. Ny fanoratana dia atao amin'ny alalan'ny fampiasana ireo famantarana sy lava vetivety, izay voatondro ho teboka sy teboka. Ankoatra izany, misy ny fiatoana manasongadina ny fisarahana ny taratasy. Noho ny fisehon'ny loharanon-tserasera manokana, azonao atao ny mandika ny code Morse amin'ny Cyrillic, Latin, na ny mifamadika amin'izay.
Mamaky ny rakitra FB2 anaty aterineto
Boky elektronika izao dia tonga hanolo ny boky. Ny mpampiasa dia mandefa azy amin'ny ordinatera, smartphone na fitaovana manokana mba hamakiana bebe kokoa amin'ny endrika samihafa. Ny FB2 dia afaka manavaka ny karazan-doka rehetra - iray amin'ireo malaza sy tohanan'ny fitaovana sy fandaharana rehetra.
Adika PDF amin'ny DWG online
PDF no endrika malaza indrindra ho an'ny tahiry ho an'ny tahiry amin'ny votoaty sy ny grafika. Noho ny fielezany malalaka, ity karazana tahirin-kevitra ity dia azo jerena amin'ny ankapobeny misy fitaovana fikirakirana na portable - maro ireo fangatahana amin'izany. Saingy inona no tokony hatao raha sendra misy sary halefa any anaty rakitra PDF, izay tokony hohavaozina?
Famoahana ny rindrambaiko amin'ny aterineto
Ny mpandahateny dia tsy manana fitaovana manokana atsy an-tànana, izay ampiasainy amin'ny code. Raha toa ka mitranga izany dia mila manitsy ilay kaody ianao, ary tsy vita ny rindrambaiko mifanaraka amin'izany, dia afaka mampiasa ny serivisy maimaim-poana amin'ny aterineto ianao. Ankoatra izay dia hiteny amin'ny tranokala roa isika ary handinika amin'ny antsipiriany ny fitsipiky ny asa ao aminy.
Tadiavina amin'ny aterineto
Ny klavier no fitaovana maoderina lehibe indrindra hiditra ny fampahalalana ao amin'ny solosaina na solosaina. Ao anatin'ny dingan'ny fiasana amin'ity manipulator ity dia mety hitranga ny fotoana tsy ampoizina rehefa mihodina ny fanalahidy, fa tsy ny marika entintsika hiditra, sy ny sisa. Raha te hamaha io olana io ianao, dia mila mahafantatra tsara ny atao hoe: amin'ny mekanika ny fitaovana entana na ny rindrambaiko izay itondrana ny soratra.
Ampio mozika amin'ny lahatsary ety anaty aterineto
Ny mozika azo antoka dia mety ho fanampim-panazavana ho an'ny lahatsary rehetra, na inona na inona ao anatiny. Azonao atao ny manampy horonam-peo mampiasa programa manokana na serivisy an-tserasera izay mamela anao hanova video. Manampy mozika amin'ny horonan-tsarimihetsika an-tserasera Maro ireo mpampiasa lahatsary an-tserasera, ka ny ankamaroan'izy ireo dia manana ny fahafaha-miasa hanampiana azy ho mozika.
Amboary ny sary PNG mankany JPG an-tserasera
Misy karazana sary malaza marobe izay matetika ampiasain'ireo mpampiasa. Samy hafa ny toetran'izy ireo ary mety tsara ho an'ny tanjona samihafa. Noho izany, indraindray dia ilaina ny manova ny rakitra karazana iray amin'ny iray hafa. Mazava ho azy, izany dia azo atao amin'ny fanampiana fandaharan'asa manokana, saingy tsy mety foana izany.
Sokafy DOCX anaty aterineto
Matetika dia mitranga izany fa mila manokatra haingana ny antontan-taratasy sasany, fa tsy misy programa ilaina ao amin'ny solosaina. Ny safidy mahazatra indrindra dia ny tsy fisian'ny birao iray an'ny biraon'ny Microsoft napetraka ary, noho izany, ny tsy fahafahan'ny miasa amin'ny DOCX. Soa ihany fa azo atao ny mamaha ny olana amin'ny fampiasana ny serivisy amin'ny Internet.
Ahoana ny fomba hanaovana ny faktiora amin'ny Internet
Fandoavam-bola - antontan-taratasy manokana izay manamarina ny fandefasana ny entana ho an'ny mpanjifa, ny fanomezana ny serivisy sy ny fandoavam-bola. Miaraka amin'ny fanovana ny lalàna momba ny hetra, miova ihany koa ny rafitry ny taratasy. Tsy mora ny manamarina ny fiovana rehetra. Raha tsy mikasa ny hamolavola ny lalàna ianao, fa te-hameno ny faktiora marina, dia ampiasao ny iray amin'ireo tolotra an-tserasera voalaza etsy ambany.
Ahoana ny famadihana ny CR2 amin'ny JPG amin'ny aterineto
Indraindray misy toe-javatra tokony hanokafana ny sarin'ny CR2, fa ny mpijery sary natsangana ao amin'ny OS kosa dia mitaraina noho ny fanitarana tsy fantatra. CR2 - sary an-tsary, izay ahitanao ny fampahalalana momba ny mari-pamantarana ny sary sy ny fepetra nodiavina. Ity fanitarana ity dia noforonin'ny mpamosavy fitaovana malaza iray manokana mba hisorohana ny fahaverezan'ny sary.
Ahoana no hanokafana tahiry DWG amin'ny aterineto
Dossiers amin'ny DWG - sary, sary roa sy dimanjato, izay noforonina mampiasa AutoCAD. Ny fanitarana dia ny "sary". Ny rakitra vita dia afaka sokafana amin'ny fijerena sy fanitsiana amin'ny rindrambaiko manokana. Sites raha miasa miaraka amin'ny DWG files Tsy te-haka rindrambaiko amin'ny fiasan'ny DWG sary ao amin'ny solosainao ve ianao?
Ahoana ny fomba hametahana sary roa ao anaty aterineto
Ny fampidirana sary roa na maromaro ho sary iray dia singa malaza be izay ampiasaina amin'ny mpamoaka sary rehefa manamboatra sary. Azonao atao ny mampifandray sary ao amin'ny Photoshop, saingy sarotra ny mahatakatra io programa io, ankoatra izay, mitaky amin'ny loharanon'ny ordinatera.
Tolotra an-tserasera amin'ny famerenana ny rakitra XLSX mankany XLS
Raha mila manokatra ny rakitra XLSX ianao ao amin'ny tontolon'ny Excel finds older than 2007, dia tsy maintsy miova fo amin'ny format taloha - XLS ilay rakitra. Ny fiovam-po toy izany dia azo atao amin'ny fampiasana ny programa mety na mivantana amin'ny browser - amin'ny aterineto. Ahoana no fomba hanaovana izany, hiteny amin'ity lahatsoratra ity isika.
Tapero ny TIFF amin'ny PDF an-tserasera
Rehefa mijery na manaiky ny votoatin'ny taratasin-taratasy sy ny sary natonta, dia matetika ny valiny dia napetraka amin'ny sary maromaro misy loko lehibe - TIFF. Ity format ity dia manohana tanteraka ireo mpamoaka horonan-tsary sy mpijery sary. Ny zavatra iray hafa dia ny fampiasana antontan-taratasy toy izany, mba hametrahana azy io, dia tsy mety amin'ny fandefasana sy fanokafana amin'ny fitaovana portable.
Mamoròna bokikely an-tserasera
Ny mahasarika ny mpihaino ho amin'ny serivisy sy ny tolotra dia matetika mampiasa vokatra fanontam-pirinty toy ny bokikely. Izy ireo dia afatotra roa, telo, na mihoatra. Ny fampahalalana dia napetraka eo amin'ny tsirairay amin'ireo antoko: tontolon'ny sary, sary na fitambarana. Amin'ny ankapobeny, bokotra dia noforonina mampiasa rindrambaiko manokana ho an'ny fitaovana vita printy toy ny Microsoft Office Publisher, Scribus, FinePrint, sns.
Miverena mozika WAV mankany MP3
Indraindray ianao te-handefa rakitra horonan-tsarimihetsika ao amin'ny format WAV MP3, matetika indrindra noho ny hoe mitaky toerana malalaka feno na mihetsika amin'ny mpilalao MP3. Amin'ny tranga toy izany, afaka mampiasa tolotra aterineto manokana ianao izay afaka manatanteraka io fiovam-po io, izay mamonjy anao amin'ny fametrahana fampiharana fanampiny amin'ny PC.
Ahoana ny fomba hamoronana karatra fandraisam-bahiny amin'ny aterineto
Karatra raharaham-barotra - fitaovana fototra amin'ny fampiroboroboana ny orinasa sy ny serivisy ho an'ny mpihaino maro. Azonao atao ny mandidy ny sarinao amin'ny orinasa manokana amin'ny sehatry ny dokam-barotra sy ny famolavolana. Miomàna amin'ny zava-misy fa hividianana zavatra be dia be ireo vokatra fanontam-pirinty ireo, indrindra raha amin'ny fomba manokana sy tsy mahazatra.
Ahoana ny fomba hamoronana marika famantarana anaty aterineto
Mifantoha amin'ny teny manan-danja ao anaty lahatsoratra na manoritra ny fomba fiteny iombonana matetika ao amin'ny lahatsoratra hanampy ny marika famantarana. Ny tolotra manokana dia ahafahanao mamantatra tsara ny fampahalalana ny lahatsoratra. Amin'izao fotoana izao isika dia hiresaka momba ireo tranonkala malaza sy mahomby izay ahafahana mamorona rahona marika amin'ny tsindry vitsy monja.